पोखराबाट जटिल अवस्थामा फर्किएकी लुलाङकी मनकुमारीको म्याग्दीमा सफल अप्रेसन | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार पोखराबाट जटिल अवस्थामा फर्किएकी लुलाङकी मनकुमारीको म्याग्दीमा सफल अप्रेसन
पोखराबाट जटिल अवस्थामा फर्किएकी लुलाङकी मनकुमारीको म्याग्दीमा सफल अप्रेसन
२०७३, ११ चैत्र शुक्रबार १६:१७
जिल्लाको विकट लुलाङकी ५१ बर्षिया मनकुमारी विक १० दिनसम्म पोखरास्थित गण्डकी अस्पतालको आइसियूमा बसिन् । ‘बी’ नेगेटिब रगत र मुटुको समस्यालाई तत्कालै अप्रेसन गर्न नसकिने चिकित्सकले बताएपछि गम्भीर अवस्थामै जिल्ला फर्किइन् । मुटुको चाल प्रतिमिनेट ४६ रहेको अवस्थामा बेनी फर्किएकी मनकुमारीलाई जिल्ला अस्पतालमै अप्रेसन गरेका एक गाउँलेले जानकारी गराएपछि आफन्तको सहयोगमा अस्पतालमा पुगिन् ।
विरामीको अवस्था स्वास्थ्यकर्मीले चिकित्सकलाई जानकारी गराएपछि उनको उपचार सुरू भयो ।
‘नाजुक अवस्थामा अस्पतालमा आउनुभएको थियो । तत्कालै हामीले लिएको प्रयासबाट उहाँको ज्यान बच्न सफल भयो’ डा. धिरेन मल्लले बेनीअनलाइनलाई भने । उनका ‘बी’ नेगेटिब रगतको आवश्यकता संगै मुटुको चाल प्रति मिनेट ७५ भन्दा माथी हुनुपर्नेमा विरामीको ४६ रहेको अवस्थामा चिकित्सक संगको सल्लाहबाट अप्रेसन गरिएको बताए । ‘एउटा सफल अप्रेसन सेवा लिएको विरामीको सहयोगमा उहाँको ज्यान जोगियो । म्याग्दीमा आएपछि भएका ठुला अप्रेसन मध्येको एका हो’ डा. मल्लले भने ।
एनेस्थेसिया अमर मर्हजन, डा.अनिल पोख्रेल लगाएतका स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितीमा अप्रेसन सफल भएपछि आफन्तले अस्पतालमै खुसीयाली मनाएका थिए । अनुभवी चिकित्सक, जागिरे मानसिकता मुक्त, विरामीमैत्री ब्यवहारले पछिल्ला दुईबर्षमा म्याग्दी जिल्लामा चिकित्सा क्षेत्रकै जटिल र दुर्लभ मानिएका अप्रेसनहरू समेत सफल भएका छन् । सास मात्रै बोकेर आएका विरामीको सफल उपचार हुन थालेपछि धमाधम जटिल अवस्थाका विरामी समेत अस्पतालमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । करिव ५० देखी ७० हजारसम्म खर्च हुने अप्रेसन अस्पतालमा निश्ुल्क उपलब्ध हुन थालेपछि जिल्ला बाहिरबाट समेत विरामी आउन थालेका छन् ।
दुई बर्षको अवधिमा अस्पतालमा अप्रेसन सहितको प्रसुती सेवा लिएका १ सय २४ महिला, पिसावको थैलोमा भएका ढुङ्गा, अण्डकोष तल नझरेको, चक्कु प्रहारबाट फोक्सोमा रगत र हावा जमेर अचेत अवस्था भएको विरामी, ेन्डिक्स, १५ हर्निया, २४ हाईडोसिल, छाला ग्राफ्टिङ, भेसेक्टोमी, मिनील्याप, हड्डीको अप्रेसन,नसा चुडिएको, हड्डीले ठाउँ छोडेका जटिल तथा जिल्लामा कल्पना समेत नगरिका विरामीको अप्रेसन सफल भएको वरिष्ठ मेडिकल सुपरीटेण्डेण्ड डाक्टर रोशन न्यापानेले बताए।
‘अनुभवी चिकित्सकको सक्रियताले देशमै राम्रो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । अझै थप सुविधा विस्तारको तयारीमा छौ’ न्यौपानेले भने । निक साईमन इन्टिन्यूट अमेरिकाले अनुभवी चिकित्सक संगै आधुनिक उपकरण सहयोगमा समेत प्राथमिकता दिएपछि जटिल अप्रेसन सम्भव भएको चिकित्सकको भनाई छ । यसबर्ष देखी ५० सैयाको अनुमति संगै पूर्वाधार विस्तारको क्रममा रहेको अवस्थामा अस्थायी संरचनामा समेत सेवा र सुविधालाई निरन्तरता दिने अस्पतालले जनाएको छ ।
Previous articleओमकुमारी शान्ति कोषको साधारण सभा हुने
Next articleस्मार्ट बन्छ जीवन भन्दै अर्मनका नवविवाहित जोडीहरुलाई शुभकामन